. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ၂၄ နှစ်ပြည့်
မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်လေးပါ .. ဒီနေ့က ခါးခါးရဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့ .. ၂၄ ပြည့်ပြီဆိုတော့ ၂၅ လို့ မှတ်ရတော့မယ်လေ .. ၂၅ ဆို အပျိုကြီးဖြစ်ပြီတဲ့ ..
တကယ်တော့ မွေးနေ့အတွက် သပ်သပ် ပို့စ်မတင်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတာ .. လူက စိတ်သိပ်မကြည်ဘူးပေါ့နော် .. တယောက်တည်းနဲ့ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ချင်နေတာ .. :D
မနေ့က အိမ်ပြန်ရောက်တော့ စောစောအိပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ် .. ဘလော့လေးခဏ၀င်ပြီး အိပ်မယ်ပေါ့ .. ခဏပါပဲ .. ၈နာရီလောက်ကနေ ၁၂ နာရီလောက်ထိပဲ .. :P .. မောင်နှမတွေ အကုန်လုံး ၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တာ .. မထင်မှတ်ပဲ မွေးနေ့အကြိုက စည်ကားသွားပါတယ် .. အဲဒီအတွက် အားလုံးကို တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မွေးနေ့ဆုတောင်းနဲ့လက်ဆောင်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးမယ်နော် ..း)
မနေ့က ပွဲစည်သွားတယ် .. ကိုဖိုးစိန် နဲ့ တီတို့ပေါ့ .. ကိုဖိုးစိန်က နံပါတ်ဆို ၁ မှတဲ့ .. နံပါတ် ၁ လိုချင်တယ်တဲ့ .. ကဗျာကို အမြန်စပ်ပေးတယ် .. ဒါနဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကို နံပါတ် ၁ မှာ ထားပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် .. အားလုံးလည်း တူတူပျော်ရအောင် ..း)
လေကကြီးမှာ မင်းလေးက ဖြူစင်တဲ့နှလုံသားကိုပိုင်ဆိုင်တယ်တဲ့
ထာဝရငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေတဲ့ (ဒါကတော့ ကိုဖိုးစိန်ပို့ပေးတာပါ .. ဒုတိယကဗျာပါ .. ပထမကဗျာက ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဘူးထင်လို့ ဒီကဗျာကို အရင်တင်လိုက်တာပါ .. )
ချစ်တီက ချစ်တူမအတွက် ကဗျာနဲ့စာလေး အပြင် ကြော်ငြာပါ ထည့်ပေးပါတယ် ..း) ဆက်လက်ရှုစားပါ .. :D
ခုလို မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ တီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. အပြည့်အစုံ ဘောနပ်စ်ပါဖတ်ချင်ရင် ဒီက လင့်လေးကို သွားပေးပါနော် .. ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ် .. :D
ခု ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ နောက်ကဗျာလေး ထပ်တင်ပေးပါမယ် .. ကိုယ်တိုင်က ဒီလောက် မတော်မကောင်းတာသိနေလို့ သည်းခံဖတ်ပေးပါနော် .. :D
ဒါက မရောင်ရဲ့ လက်ဆောင်လေးပါ ..
ချစ်သောညီမလေး မိုးခါး ရေ ......
15 မေ မှ 2009 တွင်
မရောင်က ဘလော့မှာလည်း တင်ပေးထားတယ် .. ဒီမှာပါ
ချစ်ပါးလုံးလေးကလည်း သူများထက်နောက်မကျချင်လို့တဲ့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ..
me: သိုင်းကျူး ညလေး
9:35 PM ကျောင်းသွားရင်အရင်ဆုံးမပြောရမှာစိုးလို့
မမရေ မွေးနေ့လက်ဆောင်နော်။ မနက်ဖြန်မှဆို ကျောင်းသွားရမှာမို့လို့ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဒါက ဂျပန်ရဲ့ ဆုတောင်းလေးပါ
ဂျပန်: ၀တ်ရည်မိုးခါးမေသဲလေး ..... ထာဝရပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့
မေဒီ: Happy Birthday မမ
ဒီဒီက နက်ဖြန် အားမအားမသိသေးလို့...ညကျောင်းလည်း တက်ကဦးမှာဆိုတော့ ကြိုပြောထားရတာပေါ့
ပြာသိုလက်ဆောင် မိုးခါးပုံပါ :D
ညီမလေး မိုးခါး ... ရေ
နောက်လာမဲ့ ၂၅ နှစ်ထိ
စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှိလှတဲ့
မင်္ဂလာပါ။ မနက်ဖြန်ဟာ ၀တ်ရည်ရဲ့ မွေးနေ့လို့သိရပါတယ်။ ကျနော်တို့ သိပ်မကြာသေးတဲ့ အချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက် အတော့်ကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ၀တ်ရည်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ကျနော် အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ (၂၃) နှစ်မြောက် မွေးနေ့လို့ ထင်ပါတယ်။
မှားသွားရင်တော့ ခွင့်လွတ်ပေါ့နော်... မွေးနေ့အမှတ်တရလေး ကျနော် ရေးပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
ချစ်သော မိသားစု၊ ချစ်သူ နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ပါစေလို့ ကျနော် ရင်ထဲကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်လဲ အဆင်ပြေပါစေဗျာ....
အသက် (၂၃) ဆိုတဲ့ အရွယ်မှာ
ဘ၀ရဲ့ အခက်အခဲမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့
ဘ၀ရဲ့ တဆစ်ချိုး အကွေ့အကောက်မျိုးစုံ
ကိုတောင်ပေါ်က ၁နှစ်ငယ်ပေးထားပါတယ် .. ငြိမ်နေလိုက်ရကောင်းသား .. :D
အငယ်ဆုံးမောင်လေး အဆိပ်ရဲ့ ဆုတောင်းလေးပါ
မနက်ဖြန် မိုးလေး ဝသ သတင်း ကိုကြေညာပါတော့မယ် မနက်ဖြန်တွင် .. ပျော်စရာမွေးနေ့ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုလေးထွက်ပေါ်လာ ပါမည်...ထို ရာသီဥတုသည် လူတကာ တိုင်းကို လိုက် လံ ပေါ်ပေါက်လျှက်ရှိရာ ... ယခုအခါဆိုရင်... မနက်ဖြန် မှာ မွေးနေ့ရာသီဥတု ကိုခံစားရမည့်သူမှာ ကျနော် တို့ရဲ့ ဘလော့ဂါမမကြီး
ကျနော် ဒီကနေဘဲဆုတောင်ပေးလိုက်မယ်... လိုအင်ဆန္ဒ တစ်လုံးတစ်ဝကြီးပြည့်ပါစေ......... ဟတ်ပီဗာတ်ဒေးပါ
သူ့ခမျာ စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြားက ဆုတောင်းပေးတာပါ ..း) .. သူ့ပို့စ်လေးက ဒီမှာ ပါ .. ကိုယ့်ကိုယ် ဘလော့ဂါလို့တော့ မထင်ရဲသေးဘူး မောင်လေးရေ ..
သူငယ်ချင်းကြီး ဗညားရှိန်ရဲ့ လက်ဆောင်ပါ
ငါအမြန်ရေးလိုက်လို့ ကဗျာလေး မကောင်းရင် နည်းနည်းသည်းခံပေးပါ သူငယ်ချင်းလေးရေ ။
ထာဝရ ကြယ်စင် . . .
လင်းလက် စူးရှနေတဲ့ ကြယ်တစ်စင်း
တောက်ပတဲ့ ပျိုမြစ်ခြင်း အရေးအသားတွေနဲ့
တို့တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သူ . . . . . . .
သူငယ်ချင်း မင်းရပ်ရတော့မယ့် ဘ၀မှတ်တိုင် ၂၅
အမိမြေကို မာန်တင်းကာ ခွဲခွါခဲ့ပြီး ရေမြေခြားမှာ
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပျော်ရွင်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း
ဘ၀ ဆူးခင်းလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ရင်းနဲ့ပဲ
သူငယ်ချင်း မင်းစိုက်ထူခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင် ၂၄ ခုပြည့်ခဲ့ပြီး . . . . . . . . .
ဘ၀ကို ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေး
သူငယ်ချင်း ခင်တတ်လွန်းတဲ့ ကောင်မလေး
စိတ်ကလေးက ခုဆီထမင်းကျော် . .
ခုစာကလေးကြော် . . ဖြစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး
အဲဒီစိတ်ကလေကို မင်ရင်းနဲ့ပဲ တို့တွေ မင်းကို ခင်တတ်ခဲ့တယ် . . . . . . . .
အရောင်တွေ လင်းလက်နေတဲ့ ကြယ်တစ်စင်း
စာရေးစာဖတ် ၀ါသနာပါတဲ့ သူမ
နောင် အနှစ် ၂၀ မှာ
စာရေးဆရာကြီး “ ဟင်နရီဂျိမ်း ”လိုမဖြစ်ဘူးလို့
ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ . . . . . . . . .
စာရေးဆရာမ “ ဂျေကေ ရိုးလင်း ” လိုမဖြစ်ဘူးလို့
ဘယ်အရာမဆို ဇွဲမလျှော့ စိတ်ဓာတ်ပြင်းတဲ့ သူ
သူမသွေးတဲ့ ကလောင် မကျိုးသရွေ့
အနာဂတ် လမ်းတွေ တောင်ပနေတဲ့ သူ . . . . . . . . . .
၁၅ ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မယ် မွေးနေ့မှစ၍
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေ တစ်ထပ်တည်းကျ
ရည်ရွယ်တဲ့ ဘ၀ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်လို့
မိဘ အားကိုရတဲ့ သမီးလိမ္မာလေးဖြစ်ပြီး
ချစ်သူ ခင်သူများနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွင်သွားနိုင်ပါစေလို့
ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ငယ်ချင်းရေ . . . . . . . . . . . . . .
ဗညားရှိန် . . . . . . . .
စီဗုံးမှာ ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ မောင်နှမ များ
ညခင်း: မနက်ဖြန်မွေးနေ့မှာ ဘာကျွေးမှာလည်း ....မိုးခါးရေ လာချောင်းကြည့်သွားတယ်။
15 May 09, 07:34
ကိုကိုမောင်: ရောက်ပါတယ် မိုးခါးရေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
15 May 09, 05:34
အိုက်ခီလောက်: မွေးနေ့ ဆိုလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကို အမြဲပိုင်နိုင်ပါစေ ချစ်ခင်သူတွေပေါများပါစေနော် အရက်တော့တိုက်တော့ဘူး အားမှလင့်တော့မယ်
15 May 09, 05:05
ကြယ်ဖြူစင်: ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ.. ချစ်သူနဲ့ ထာဝရလက်တွဲနိုင်ပါစေ.. ကြွားနိုင်သူတွေ ကြွားထားပေါ့...အားကျ ပါတယ်ဆိုမှ...
15 May 09, 02:14
ဖိုးဂျယ်: hAppY bIrThDay ပါ အမရေ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ
15 May 09, 02:05
မိုးကုတ်သား: Happy Birthday!!! မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
15 May 09, 01:28
မနောသား: Tom : ဘာရှိလဲဟေးးးးး နာသိတယ်နော် .... :P
15 May 09, 00:52
ပြာသို: မောင်နဲ့ တူတူ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ တီချမ်းဆီမှာသွားကြည့်ပြီး၂ ကြွားပေါ့ ရှင်တို့ခေတ်ပဲ ဟိဟိ
15 May 09, 00:49
ပြာသို: Happy Birthday အပျိုကြီးးးး :P
15 May 09, 00:40
မြစ်ကျိုးအင်း: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်.။
15 May 09, 00:11
reenoemann: ပျော်ရွင်စရာ မွေးနေ့လေနဲ့ အတု ဒီမောင်နှမတွေမနဲ့ ထာဝရကြယ်စင်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ထာဝရ အတူ လက်တွဲနိုင်ပါစေ။
15 May 09, 00:08
dew: စပယ်ရှယ် ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော် ..။ ဒါကြောင့် သဲ ကို9star hotel မှာ လိုက်ကျွေးရမယ် ..။9star hotel မဟုတ်ရင် လိုက်စားဘူးးးး ဒါဗြဲ ..! :lol:
15 May 09, 00:06
dew: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်.။ ရုံးမှာလည်း အလုပ်များများ မပိပါစေနဲ့ .။ ရုံးချိန်အတွင်း ချက်တင်များများ ထိုင်နိုင်ပါစေ .။ တစ်လကို လစာ 10000 $ ရလာပါစေ ..။ (....) မြန်မြန် ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ ။ အဟိ :glad:
14 May 09, 23:54
14 May 09, 23:53
chitpalone: မမရေ မနက်ကျောင်းက ပြန်ရောက်မှပဲ စားတော့မယ်နော်။ အဟိ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
14 May 09, 23:38
ဘာတွေတုန်း: ချစ်မကြီး..မနက်ဖြန်မွေးနေ့ဆို...စားရ၀ါးရတော့မယ်ပေါ့.. :D မနက်ဖြန်မှ မွေးနေ့ဆုတောင်ူရင် နောက်ကျနေမှာ ဆိုးလို့ခုထဲက လာပြောတာ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.။ ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ နှစ်တိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
14 May 09, 21:46
reenoemann: ညခင်း ဖွလို့ အစ်ကို သိရတာပါကွာ EVE Birthday ပါ
14 May 09, 21:39
mgnge: မွေးနေ့ မှာဘာကျွေးမှာလည်း။။။ ငါကျောင်းပိတ်တယ် အပီ လာဆွဲ မယ်..။နေရာသာပြော :P
14 May 09, 21:38
နွေး: မမ tomw ညနေ ဘယ်မှာစောင့်နေ ရမလဲ.. ;-)
နေခြည် ကလည်း လှမ်းပြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ် ..း)
ဖုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုတောင်းပေးသူအားလုံးကို ခင်မင်မှုအတွက် အလေးအနက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကောင်းကင်ကြီးက ကြည်လင်နေပါတယ် .. ဒီလိုပဲ ကျမစိတ်တွေလည်း ကြည်လင်နေခဲ့တယ် .. အဲဒါ အားလုံးရဲ့ မေတ္တာစေတနာကြောင့်ပါ .. ချစ်ခင်သူများအားလုံးကို ရင်ထဲကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မေတ္တာတရားက မထိ မတွေ့ မမြင်နိုင်ပေမယ့် အင်အားကြီးမားပါတယ် .. မဲ့နေသူကို ပြုံးလာအောင်လုပ်နိုင်တယ် .. နွမ်းနေတာကို လန်းဆန်းအောင် ပြုနိုင်တယ် .. ငိုနေသူအတွက် ပုဝါတစပါ .. အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. အားလုံးလည်း ပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ..း)
မွေးနေ့ကို မသိလိုက်ဘူး မပြောဘူး ဆိုပြီးတော့တော့ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့နော် .. လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်း ကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ် ..
ညက ချစ်သူနဲ့ဖုန်းပြောတာ ၁နာရီကျော်သွားတယ် .. ကျမဘ၀လေးကို ငြိမ်းချမ်းစေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မနက်မိုးလင်းတော့ ဖေနဲ့ မေက ဖုန်းလှမ်းခေါ်တယ် .. သမီးအတွက် အဆုံးစွန် ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာ စေတနာ နဲ့ အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဖေကြီးနဲ့ မေကြီးကို အရမ်းချစ်ပါတယ် ..
မနက်ဖြန် စနေနေ့ကို မွေးနေ့အတွက် တခုခုစီစဉ်ဖို့ရှိပါတယ် .. အားလုံး အဆင်ပြေမယ်ဆို လာစေချင်ပါတယ် .. အားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ်နော် ..
စနေနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ (၁၆-၅-၀၉)
Hougang ave 3, Blk 248, #06-426,sg, 530248.
(လက်ဆောင် ပစ္စည်း ယူမလာဖို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်နော် .. ကျေးဇူးအများကြီးကို တင်ပါတယ် .. အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ..း)
နောက်ဆက်တွဲပါ .. ချစ်ရတဲ့ ညီမလေး နိုနို နဲ့ မယဉ်မင်းက လှမ်းဆုတောင်းပေးထားတာပါ ..
နိုနို: Happy Birthday မ ..
အိမ်ကို လွမ်း နေ လား
နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပေ့ါ မ ရယ်...
wish u to beavery very happy girl from 15th May,2009 to infinity ...
မ ဘေးမှာ နို အမြဲရှိတယ်...ဟဲဟဲ...
(မယုံရင် ဘေးကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပါလား )
မေသဲရေ နိုနဲ့ အမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ..း)
ဥပသကာ: မွေးနေ့ဆိုတော့ ရောက် လာတယ်၊ မန်ံ လိုံ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ငြိမ်း ချမ်း ပါစေ ညီမငယ် ရေ
ဒီမွန်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါ .. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ .. နင့်စာထဲကလောက်မကောင်းတာ ကိုယ်တိုင်သိတယ် .. :D
ညနေက သယ်ရင်းကို အွန်လိုင်းမှာ ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရတော့ 'နက်ဖန် ငါ့မွေးနေ့' ဆိုလို့ အမှတ်တရ မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာလေး ရေးမယ်လုပ်ပါတယ် မီးကရုတ်တရက်ပျက် ချက်ခြင်းပဲ အပြင်ထွက်ပြီး ဆိုင်ကိုပြေးတော့လဲ ၁၀ နာရီကျော်ပြီဆိုပြီး ကုလားတွေက ကွန်ပျူတာ ပေးမသုံးတော့ပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ မဖြစ်ချေဘူးဟ ဆိုပြီး အိမ်ကိုပြန် ကသုတ်ကရက်နဲ့ အေဖိုး စာရွက်လေး စွဲပြီး ဒုန်းဆိုင်းလိုက်ရတာရယ်..။ (မှားတာရှိလည်း ကိုယ့်ချင်း ကိုယ့်ချင်းတွေပဲ အားနာတော့ဘူး နော် .. ဟီး)
ကျွန်တော့ ရဲ့ Blog လေး စလုပ်ဖြစ်တုန်းက ပေါ့ဗျာ။ မှတ်မိပါသေးတယ် အိမ်ကိုလာပြီး စာအုပ်တွေ ဘတ် သွားပါတယ် ဆိုလို့ စာအုပ်ဖိုးလိုက်တောင်းရင်း စပြီးရင်းနှီးခဲ့ ကြတာ။ အဲဒီတုန်းက လူကလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ fresher လေးဆိုတော့ ဘာမှလည်း မလုပ်တတ်ဘူးရယ်။ အွန်လိုင်းကစာအုပ်လေးတွေ ဒေါင်းပြီး အိမ်မှာတင် ၊ပြီးတော့ youtube ကသူမျုားသီချင်းတွေ တင်နဲ့ ဒါလောက်ပဲ လုပ်တတ်တာရယ် ..။အဲဒီမှာ ချိုကိုသဇင် တို့ နွေးနွေးသဲမွန် တို့ မိုးခါး တို့ ဆိုတဲ့ မောင်နှမတွေ နဲ့ စရင်းနှီးလာခဲ့တာပေါ့..။ဒီကောင်မလေးတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေ နဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အိမ်လေးကို အသက်သွင်းနိုင်တယ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး ။ နောက်ပိုင်း Gtalk မှာ တွေ့တော့မှ ဒီသယ်ရင်းမလေး မိုးခါး ရဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပိုပြီး သိခွင့်ရ ခဲ့တယ် ( အဟဲ ကိုယ့်ချင်း ကိုယ့်ချင်းမို့ ပြောတာဟုတ်ဘူးနော် )။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အပျင်းကြီးပြီး အလုပ်မလုပ်ချင် ၊ အလုပ်မလုပ်တော့ ဘိုင်ပြတ် (အဟီး) ၊ ဘိုင်ပြတ်တော့ ဟိုကိုပဲသတိရတာလိုလို ဒီကိုပဲလွမ်းတာလိုလိုနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကကျ ။အဲလိုအချိန်မျိုးမှာ အလုပ်တွေနဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားကပဲ ကျွန်တော်ညည်းသမျှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားထောင်ပေးပြီး အားပေးစကားပြောတတ်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ပေါ်လီယာနာလေး မိုခါးအတွက် စောစောကပြော သလိုပဲ မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်လိုက်တယ် ။သယ်ရင်းမိုးခါး တစ်ယောက် ယနေ့ မှသည် အသက် ၁၂၀ ကျော် ရှည်စေသော်ဝ်..။
ပန်းတိုင်နဲ့ မနီးခင် အားပျော့ချင်ပြီလား..။
ရေရှည်မှာ ကျန်ခဲ့ လိမ့်မယ်
မရှိခဲ့တဲ့ သစ္စာတွေမှ မဟုတ်ဘဲ
သရုပ်ခွဲ လိုက်တဲ့ အခါ
အနာသိ ဆေးရှိရမယ် သူငယ်ချင်း...။
"အစွဲ" တွေ မောင်းထုတ်ဖို့တော့ လိုမယ်
"ဆန္ဒစွဲ" လို့ တံဆိပ်ကပ်
"၁၁" လက်မပေတံနဲ့ တိုင်းထွာပြတတ်ရဲ့..။
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အားထားရတဲ့ သမီးကောင်း ရတနာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။
မိုးစက်အိမ်: Happy Birthday မမိုးခါး...မွေးနေ.မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေအမရေ...
15 May 09, 12:01
15 May 09, 12:52
ပျိုခေတ်: ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ မမိုးခါးရေ
15 May 09, 12:43
flowerpoem:့ Happy Birthday မိုးခါးရေ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
15 May 09, 12:30
သူရဿဝါ: မမမိုးခါးရေ .... မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ .....
နှင်းစက်: H@PpY B!rThdAy မိုးခါးလေး
15 May 09, 14:17
ကဗျာမလေး: Happy Birthday ပါ ညီမလေး ..... သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ :)
15 May 09, 14:12
ဝလုံးဝိုင်းဝိုင်း: happy birthday ! Maybhappy n pleased at the coming days !
15 May 09, 13:51
poohgallery: HAPPY BIRTHDAY
15 May 09, 13:43
အိုက်ခီလောက်: နေ့ လည်တရေးနိုးပြီးမွေးနေ့ ပွဲလာတာ ကျန်သေးလားဟင် မိုးခါး
ကျနော့်ကဗျာက မွေးနေ့ကဗျာတောင် ဆန်ချင်မှဆန်ပါလိမ့်မယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ လက်ခံပေးပါနော်
လူ့ပြည်ကအပ်တစ်စင်းနဲ့ ဗြဟ္မာ့ပြည်ကအပ်တစ်စင်း ထိတွေ့ကြတာမဟုတ်ဘူး
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ လောကရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတာ
အခုပဲ ဇာတ်ဝင်ခန်း ၂၄
တခါတလေတော့လည်း `ဒီလိုပါပဲ´ အမရယ်
အမြဲတမ်းလည်း `ဒီလိုပါပဲ´ အမရယ်
ဘ၀ဆိုတဲ့ကောင်က သူ့ကြိုးဝိုင်းထဲပဲ ကျနော်တို့ကို
ပေါ်လာလိုက် … မြုပ်သွားလိုက်
မြုပ်သွားလိုက် … ပေါ်လာလိုက်နဲ့
ဘ၀ကို အလျားလိုက်ကြီး ဖြတ်ကူးနေရတာ
ပန်းက ရနံ့ကို လွှင့်ပစ်လိုက်သလောက်လေးပါ
……………………………………. ဟိုတစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်ခါနီးတဲ့အခါ
`လူဆိုတာ ……..´ လို့ နောင်လာနောက်သားတွေကို ပြောပြလာနိုင်တဲ့အခါ
ရှေ့လျှောက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းများထိပ်တိုက်တွေ့ကြပုံ
သူငယ်ချင်း………….. ၂၄ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်က
ချစ်သူ သက်ထားရခဲ့ရင်လည်း ပျော်ရွှင်သော
မွေးနေ့ကို ကိုယ်တိုင် မလာနိုင်ပေမဲ့ အထူး
သူငယ်ချင်း… မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ…
နောက်ဆုံး အလိုဆန္ဒကတော့ မွေးမိခင်နှင့်
ဒါကြောင့် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်
အနေ့နဲ့ အဝေးတစ်နေရာက ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်……။
လူကျန်မှာစိုးလို့စစ်နေတာ .. :D လစ်ဟာမှုရှိရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 5/15/2009 10:31:00 AM
ထုတ်ကြွားခြင်း .. :D
အနာ နဲ့ ဆေး
ပန်ပန်အမှု ရွာပတ်ခြင်း :P
လိုအပ်ချက် နှင့် အလိုအပ်ဆုံး